China PET Bhodhoro Muto Kupisa Kuzadza Machine fekitari uye bhizimisi | Higee
Yedu PET bhodhoro muto wekuzadza muchina mutsetse unobatanidza kuchenesa bhodhoro, kuzadza uye capping muchina mune imwe monoblock muchina. Maitiro acho anoitwa zvizere otomatiki. Kuzadza muPET bhodhoro kana bhodhoro regirazi kana kunwa bhodhoro zvese zvinogona kugadzirwa.
Kwikwidza PET Bhodhoro Juice Kupisa Kuzadza Mashini 4 mu1 Monoblock Production Line
Tinogona zvakare kushongedzera yekumwa yekugadzira mutsetse nemvura yekurapa michina, pre-kurapwa chisanganiso michina sisitimu, uye kurongedza system inosanganisira shrink sleeve kunyora muchina, shrink kurongedza muchina nezvimwe seimwe tambo yakazara.
1. Mhepo inotakura
2.Juice Kuzadza uye Kurongedza Sisitimu
RXGF yakateedzana muto unopisa yekuzadza muchina inosanganisa kusuka bhodhoro, kuzadza mvura uye kubaya mune imwe monoblock, uye iwo matatu maitiro anoitwa akazara otomatiki. Iyo inoshandiswa mukuzadza kupisa kwejusi uye tii chinwiwa. Iyo yakagadzirirwa yakakwana tembiricha yekudzora system, reverse-kuyerera system, otomatiki yekuchenesa system uye chirongwa chekutonga. Chinhu chega chega chemuchina icho chinosangana neicho mvura chakagadzirwa nemhando yepamusoro yesimbi isimbi nesimbi-yegiredhi rabha.
● Yese isina simbi yekugezesa misoro, mvura yekupfira jekiseni jekiseni dhizaini, yakawanda chengetedza kushandiswa kwemvura & yakanyanya kuchena.
● Stainless simbi Gripper nepurasitiki pad, chengetedza kushoma kwebhodhoro panguva yekuwacha
● pombi dzesimbi dzisina tsvina
● Yakakwira chaiyo yekuzadza kamwene, PLC inoshandura chiratidzo cheni, chengetedza yakakwira kuzadza chaiyo
● Giravhiti yekuzadza, & kuzadza mushe uye nekudzikama
● Yese simbi dzesimbi simbi yekudyidzana & tangi remvura, yakanaka polish, iri nyore kuchenesa
● Hapana bhodhoro risina kuzadza
● Isa & capping system, electromagnetic capping misoro, ine mutoro kuburitsa basa, ita shuwa hushoma bhodhoro kupunzika panguva yekutora
● Yese 304 yekuvaka simbi isina chinhu
● Hapana bhodhoro risina kubhowa uye otomatiki mira kana kushomeka kwebhodhoro
Unyanzvi / 500ml
3.Bhotoro Dzosera kumusoro Sterilizer
Pashure: Simba chinwiwa chizadza muchina
Zvadaro: Girazi Bhodhoro Bheri Kuzadza Machine